Maitiro ekudzivirira yako saiti kubva kune hunyengeri mune aya ekupedzisira-makore kutengesa | ECommerce nhau
Maitiro ekudzivirira yako saiti kubva mukubiridzira mune aya ekupedzisira-egore kutengesa
Gore rakapera mu-e-commerce pakanga paine kuwedzera kwekubiridzira kwe30% pakati pekutenga pakupera kwegore rapfuura, maererano neongororo yakaitwa ne ACI Pasi Pose.
Izvi zvinoreva kuti chingangoita kutenga kumwe mu97 kwakawanikwa kuve kwekunyepedzera. Kubiridzira Haisi chimwe chinhu chiri pane chishuwo chinyorwa chee-commerce mutengesi, asi iwe unofanirwa kutarisana nezvazviri uye edza kuzvidzivirira zvachose.
1 Ungazviita sei? Heano mamwe mhinduro dzekudzivirira izvi kuti zviitike mubhizinesi rako:
1.1 Ronga uye gwaro rekupedzisira-gore kutengesa:
1.2 Ramba uine ziso pane metric nguva dzese:
1.3 Kana zvasvika pakutenga mapatani, gara uchitarisira zvisingatarisirwi:
Ungazviita sei? Heano mamwe mhinduro dzekudzivirira izvi kuti zviitike mubhizinesi rako:
Ronga uye gwaro rekupedzisira-gore kutengesa:
Kutengesa kwegore-kumagumo kwakakwira angangoita gumi nemaviri muzana gore rino, saka mashandisirwo ekudzokorora uye nekufamba kwenzvimbo kwesaiti inoda kutariswa kwakawanda. Kufunga chirongwa chekubata ichi chakawedzera kufamba kuchaenda kure nzira yekuchengetedza kurongeka pane saiti uye kudzivirira mamiriro asingatarisirwe kuti aitike.
Ramba uine ziso pane metric nguva dzese:
Uchawana kuwedzera kwakawanda kwekushambadzira panguva ino, saka edza kuramba uine ziso nguva dzese uchiona chero mhando yekusagadzikana kunogona kuoneka mune metric inoratidza hunyengeri hunogona kuitika, sekuwedzera zvisina kujairika pane chimwe chigadzirwa. Mamwe makambani anopa otomatiki mhinduro dzekudzokorora uye kugadzirisa ese aya marudzi emamiriro ezvinhu, nenzira iyi makambani makuru haafanire kuzviita nemaoko.
Kana zvasvika pakutenga mapatani, gara uchitarisira zvisingatarisirwi:
Vatengi vane tsika dzinoshamisa dzekutenga mukati megore-kupera kutengesa, saka zvakajairika maitiro asina kujairika kuitika panguva ino, semuenzaniso, kuti mutengi atenge wachi inodhura uye akumbire kuti iendeswe nenyika. Kuchengeta yekutengesa kwegore rapfuura kunogona kuenda nenzira yakareba mukuyedza kutsvaga inotarisirwa vatengi kutenga mapatani uye kufanotaura zvinogona kuitika, nekudaro kutarisa chero kufamba kusingawanzoitika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kushambadzira kwenhare » Maitiro ekudzivirira yako saiti kubva mukubiridzira mune aya ekupedzisira-egore kutengesa
Zvakakosha e-commerce mafambiro eiyi 2018
SEO matipi ekukura yako e-commerce saiti ino 2018